IINGCAMANGO ZOKULUNGISA IINDLU ZOKUHLAMBELA (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Iingcamango zokuLungisa iiNdlu zokuhlambela (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwiphepha lethu elinikezelwe kwimibono yokulungisa indawo yangasese kubandakanya iingcebiso ezidumileyo, iindleko kunye noyilo lwe-DIY.
Kule mihla, ukulungisa ikhitshi kunye namagumbi okuhlambela zimbini zeendlela ezilungileyo zokongeza imali kwixabiso lokuthengiswa kwekhaya kwakhona. Apha ngezantsi sigubungela ezinye zezona ngcebiso zibalulekileyo zokulungisa igumbi lokuhlambela ukuze ufumane eyona buck yakho. Uya kufumana izimvo zangasese kunye neendlela zokuyila zokongeza ubuhle kunye nokusebenza kweprojekthi yakho yokulungisa kwakhona.
Igumbi lokuhlambela alisiyondawo yemisebenzi yezempilo kuphela kodwa likwanendawo yokuphumla emva kosuku olude oludinisayo. Indlela igumbi lokuhlambela eliyilelwe ngayo inefuthe elikhulu kwinqanaba lokuthuthuzela lekhaya lakho kunye nexabiso lalo. Ukulungisa kwakhona igumbi lokuhlambela kwelinye icala, kuya kufuna ingqalelo enkulu kwiinkcukacha kunye nokucwangciswa ngononophelo. Iiseti zakho zobuchule, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nexesha zezinye zezinto eziphambili ekufuneka ziqwalaselwe xa ucwangcisa ukulungisa igumbi lokuhlambela lakho.
Yintoni onokuyilungisa kwakhona kwigumbi lokuhlambela
Uhlaziya njani igumbi lokuhlambela
Iindleko zokuLungisa kwakhona izindlu zangasese
Ixabisa malini ukuRekhoda kwakhona igumbi lokuhlambela
Iingcamango ezincinci zokuLungisa iiGumbi lokuhlambela
Iindleko zokuhlaziya kwakhona igumbi lokuhlambela elincinci
Iingcamango zokuhlaziya i-DIY zokuhlambela
Ezinye ze ezona zinto zixhaphakileyo zibandakanyiwe kwinto yokulungisa indlu yangasese zezi:
Ukulungiswa. Izixhobo zibandakanya yonke ifanitshala esetyenziswa ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela. Le yibhafu, isinki, ikhabethe lamanzi, umchamo kunye nebhafu yokuhlambela.
NeZilinganisi Ukufakwa kufanelekile kuyo yonke imibhobho kunye nezixhobo ezicocekileyo ezifana neentloko zeshawari, iipompo, izitshizi ezicocekileyo. Xa ukhetha izixhobo zokuhlambela, qiniseka ukuba ufumana ubungqina bokugqwala kuba ziya kuhlala ixesha elide. Zisebenza njengotyalo-mali olulungileyo kunye nokuqinisekisa umgangatho ekuhambeni kwexesha. Unokukhetha kwakhona izixhobo zekhompyutha ezinokusebenza okuphindwe kabini njengeentloko zeshawari, ezikuvumela ukuba uhlambe usebenzisa indawo yokuma yeshawari okanye indawo ekhombisa indawo.
Iintloko zeshawari ziza ngeendlela ezahlukeneyo ezifana nentloko yemvula, ishawa, isandla sokutshiza okanye iintloko ezininzi. Iimpompo ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kwaye zigqityiwe. Iifinki zokuntywila zinokuba ngumngxunya omnye, iseti yeziko, ukunyusa udonga okanye ukunyuka okubanzi. Umbhobho omnye womngxunya udibanisa i-lever kunye ne-spout kwiyunithi enye. Iipompo ezisetiwe embindini zinesibambo esinye okanye ezibini zokubopha ezixhonywe kwipleyiti. Ukusasazeka okubanzi kuneziqwenga ezithathu ezahlukileyo: izibambo ezibini kunye nesipout. Iimpompo ezifakwe eludongeni zidityanisiwe ezindongeni kwaye zisebenza kakuhle ngohlobo lokuntywila lwenqanawa.
Ifanitshala. Amanye amagumbi okuhlambela afuna ifanitshala ezimeleyo okanye eyakhelwe ngaphakathi. Iitafile zamampunge ezinesitulo zilungile ukuzilungisa, isitulo esimangalisayo sokugxininisa sisebenza indawo epholileyo yokuphumla phakathi kokuhlamba, iiyunithi zokugcina kunye nokugcina ishelfu ziyimfuneko ukugcina iitawuli, izinto zokuhlamba okanye iingubo. Gcina ukhumbula ukuphakama okusemgangathweni kunye nezikhokelo zoyilo jikelele ekuyileni izinto zokubala ezakhelweyo kunye nokugcina.
Imiphezulu yeetafile . Imiphezulu yeetafile yokuhlambela zihlala zithathelwa indawo ukuvuselela inkangeleko kunye nokuziva kwesithuba. Ithayile ephelelwe lixesha, egugileyo okanye enamabala ingalichaphazela kakuhle igumbi kwaye zininzi izinto ezikhoyo zangoku ezikhoyo zokulungisa indawo yakho ngaphandle kokuchitha imali eninzi. Izinto ezithandwayo zokubala zibandakanya igranite, i-quartz, imarble kunye nezinto zangoku zomgangatho oqinileyo.
Shower ebiyelweyo okanye ulwahlulo. Ukuvalwa kwendawo yokuhlambela ayigcini kuphela igumbi lakho lokuhlambela ekubeni manzi, ikwasebenza njengokwahlulahlula indawo. Indawo yangasese eyahlukileyo kunye neshawari isebenza kakuhle ekunikezeleni ngasese kwiindawo zokuhlambela ezinabasebenzisi abaninzi ngaxeshanye. Jonga inqaku lethu ku iintlobo zeengcango zeshawa ngeembono ezingakumbi malunga neendlela ezahlukeneyo zokhetho kuyilo kunye nemvula engenasiseko vs eyenziweyo.
Iithayile. Iithayile lolona donga luqhelekileyo kunye nonyango lomgangatho wezindlu zangasese. Kulula ukuzigcina kwaye zifuna umzamo omncinci wokuzicoca.
Ukulayita. Igumbi lokuhlambela elikhanyisiweyo elinobungakanani nezibane eziqhelekileyo. Ukukhanya kwelanga okanye iibhalbhu ezimhlophe ezipholileyo ziyacetyiswa njengokukhanyiswa ngokubanzi ngelixa ubushushu obumhlophe busebenza ngcono ngokukhanya okuqaqambileyo. Izibuko ezililize, sebenzisa ukubeka izibane kumacala omabini nangaphezulu.
Umbane. Iivenkile ezilula zingabekwa kwakhona okanye zongezwe kwigumbi lakho lokuhlambela ngokuxhomekeke kwimfuno yakho.
Ukugqitywa okukhethekileyo. Ukugqitywa okukhethekileyo kubandakanya iphepha lodonga, ipeyinti ekhethekileyo, izinto zokwenziwa okanye amatye endalo.
Ubeko. Ukucwangcisa indawo yakho yokuhlambela kubalulekile ukuqinisekisa ukuba unendawo efanelekileyo yokuhamba kwaye uzinike indawo eyaneleyo. Ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe kukubekwa kwendlu yangasese. awufuni indlu yangasese ibe yindawo ekugxilwe kuyo kwigumbi kwaye kufuneka ibekwe ngokufanelekileyo.
Uya kufuna ukulinganisa ngononophelo Ubungakanani bebhafu kunye neshawa, into engento kunye nezinye izinto zokuqinisekisa ukuba unendawo efanelekileyo yoyilo lwakho. Ukongeza, indawo yokugcina eyaneleyo, indawo engenamsebenzi, inani leesinki, indawo yokuhlamba kunye nebhafu, indawo yomgangatho kunye nokungenisa umoya zizinto zonke ezibalulekileyo.
Ukulungiswa kwendawo yokuhlambela kunokwahlulwa kube ngamanqanaba amabini: Isigaba soCwangciso kwaye i Isigaba soKwakha . Isigaba sokucwangciswa kukulungiselela kwayo yonke into efunekayo ngaphambi kokuba kuqaliswe ukwakhiwa. Isigaba sokwakha, kwelinye icala, kubandakanya wonke umsebenzi omdaka, ukusukela ekudilizeni kuye ekuthambiseni indawo.
Nalu ukhokelo lwenyathelo ngenyathelo le- Isicwangciso seprojekthi yokulungisa indawo yangasese :
Utata olungileyo intombi iingoma zomtshato
1.Vavanya indawo. Inyathelo lokuqala nelona libalulekileyo kukuvavanya igumbi lokuhlambela lakho. Yazi iimeko ezikhoyo zesiza ezinje ngezinto ezinesakhiwo, umbane kunye nolungelelwaniso lombhobho. Kubalulekile ukwazi iindawo zemibhobho ngaphakathi kweendonga ukuthintela nawuphi na umonakalo ukuba kukho imfuneko yokudiliza izahlulelo.Qiniseka ukuba ubeka zonke izinto ezikwelinye icala ukuze uqiniseke ukuba ubeko lubekekile.Ukuba ufuna ukwandisa igumbi lokuhlambela, misela umkhombandlela apho unganweba khona kwaye uhambisa iindonga.
2.Assess isidingo sabasebenzisi. Phonononga indlela osisebenzisa ngayo isithuba. Inkqubo yakho yemihla ngemihla ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela iya kugqiba ukuba zeziphi iindawo ezithile ezifuna ingqalelo engakumbi. Vavanya umsebenzisi ngamnye ukwenza indawo ibe yeyakho ngakumbi. Uluhlu lokutshekisha koku kulandelayo luza luncedo ekuthatheni isigqibo malunga noyilo kunye noyilo lwegumbi lakho lokuhlambela:
Inani labantu abasebenzisa isithuba
Iminyaka yabasebenzisi (ukwazi ukuba ufuna igumbi lokuhlambela elinobubele lomntwana)
Iprofayile yomsebenzisi ngamnye (ngokwahlukileyo abanakho kunye nabasebenzisi abadala bafuna uyilo lwendalo iphela)
Inani labasebenzisi abasebenzisa isithuba ngaxeshanye
Yeyiphi imisebenzi eyenziwayo ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela? (Oku kuya kumisela iindawo ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela)
Ngaba ufuna igumbi lokunxiba?
Ngaba ufuna ibhafu okanye ishawa?
Ngaba ufuna isinki yelize enye okanye isinki ezi-2 zakhe nezakhe?
Ngaba uyafuna ukwandisa isithuba?
Ngaba ufuna ukuba wedwa? (ukumisela ukuba ufuna amagumbi endlu yangasese ahlukeneyo okanye iindawo ezibiyelweyo zeshawari)
Ngaba uyafuna ukongeza naziphi na izinto kwigumbi lokuhlambela?
Ngaba uyafuna ukususa naziphi na izinto kwigumbi lokuhlambela?
Ngaba sikhona isixa esaneleyo sezixhobo zakho, ezinje ngeblower yesandla okanye i-shaver ezenzekelayo?
Ngaba igumbi lakho lokuhlambela likhanyiswe kakuhle? Ngaba ufuna ukukhanya okongeziweyo?
Zeziphi izinto ofuna ukuzigcinela?
Ngaba unayo nayiphi na imibala oyikhethayo?
3. Misela umxholo owufunayo kwigumbi lakho lokuhlambela. Ngaba sikhona isitayile esithile kunye nombala weskimu ofuna ukusisebenzisa kwigumbi lakho lokuhlambela? I-Brainstorm yezimvo ngokwenza uphando ngezixhobo ezingenamda. Gcina umfanekiso kwiwebhusayithi odibana nayo ngelixa ubrawuza i-intanethi, usike imifanekiso kwimagazini okanye ucofe loo mxholo uwufunayo. Ezi zinto ziya kuba luncedo nakwabaqulunqi njengoko zibanika umbono opheleleyo kunye nombono wento ofuna ukuyiphumeza.
4. Thatha isigqibo sokuba ufuna ukuqesha ikontraka okanye umyili. Ukuhlaziywa kungumsebenzi onzima kwaye ongcolileyo. Ngaphandle kokuba unamava angaphambili ekubekeni iithayile okanye ukwazi indlela ngemibhobho yamanzi, ukulungiswa kwemizi yokuhlambela kufuneka kushiywe ezandleni zobungcali. Imibhobho kunye nemisebenzi yombane ifuna izakhono zekhontrakthi enamava. Ukwazi ukuba ufuna ukuqesha ikontraka okanye umyili, qala umisele ubume bomsebenzi ekufuneka yenziwe.
Ukulungiswa okuncinci Kuza kubandakanya ukutshintsha inani leethayile, ukupeyinta iindonga okanye isilingi, ukufaka ishelufu eyakhelweyo, okanye ukutshintsha itephu yakho yompompo kunye neeshawari.
Ukulungiswa okukhulu kwelinye icala baninzi abasebenzi. Oku kubandakanya imibhobho kunye nokuhlaziywa kombane, ukufaka iithayile kwakhona kwigumbi lokuhlambela nakwisilingi.
Xa ukhetha umyili / ikontraka yakho, khetha enye enerekhodi elungileyo. Buza abahlobo kunye nabanye abaninimzi ukuba bathumele. Qiniseka ukuba wenze uphando olunzulu ngophando. Unokucela isampulu yemisebenzi okanye utyelelo lwe-ocular lweeprojekthi zangaphambili ukuze ubone umgangatho womsebenzi wabo. Qasha kwakhona umntu onokuthi uhlangane naye kuba uya kusebenza endlwini yakho kangangeentsuku okanye iiveki ngokuxhomekeke kubungakanani beprojekthi. Ukubonisana nangaphezulu kwesinye kuyinzuzo kuba unokuthelekisa izindululo kwaye ufumane esona sipho silungileyo.
5. Yenza isicwangciso. Khetha Beka igumbi lakho lokuhlambela ngokumisela ukuba ufuna ibhafu yokuhlambela, ibhafu epheleleyo okanye ibhafu yekota yokuhlambela, igumbi lomgubo. Ukubekwa kufuneka kulungelelaniswe kakuhle kwimibhobho kunye neemeko ezikhoyo zesithuba ukunciphisa iindleko kunye nokuthintela nawuphi na umonakalo oqinisekisa ukuhamba komsebenzi ngokufanelekileyo ngexesha lokwakha.
Ngobuchule beka konke ukulungiswa ukunqanda ukungqubana kwezithuthi ngaphakathi kwisithuba. Kwakhona khumbula ukubeka ikhabethe lamanzi, ishawa kunye nesinki kwelinye icala ukuze ulungelelanise imibhobho ngokufanelekileyo.
Xa usenza isicwangciso sokuhlambela kwakho, ungaqala kuqala ngesikimu emva koko usiphuhlise sibe ngumzobo osebenzayo. Isicwangciso sesikimu ngumzobo olula wesicwangciso sendawo. Ibonisa indlela ozahlulahlula ngayo isithuba ngokuxhomekeke kwimisebenzi yabasebenzisi.
Isicwangciso sokufunda kwigumbi lokuhlambela sinokubonisa amagama endawo yokuhlambela, indawo yokuhlamba, indlu yangasese, indawo yokunxiba, njlnjl. Usebenzisa isicwangciso sakho, isicwangciso sokuqala ngoku sinokuphuhliswa.
Isicwangciso sokuqala ngumzobo oneenkcukacha kwigumbi lokuhlambela. Lungisa isicwangciso usebenzisa imilinganiselo ngqo yendawo ekhoyo. Oku kuyakusebenza njengesikhokelo sakho ekuvuseleleni njengoko kubonisa konke ukulungiswa okufuneka kuthengwe kwaye kulungiswe ngaphambi kokuba kuqalwe ukwakhiwa.
Ukuphunyezwa kwesicwangciso sokuqala kuya kwenza indlela yenqanaba lophuhliso loyilo. Inqanaba lophuhliso loyilo lubandakanya yonke imizobo yokusebenza eneenkcukacha kunye nezicwangciso zomgangatho wokugqibela kunye nokuphakama. Le mizobo iyakusebenza njengesikhokelo kuwe, kwikontraka okanye kumyili kuyilo lokuqikelela.
Iitemplate zesimemo somtshato zasimahla zamagama
6. Vavanya iindleko. Nje ukuba imilinganiselo, ubungakanani kunye nendawo yokuma kwezinto zibethelelwe, ngoku unganquma ubungakanani bezinto ozifunayo ukugqiba igumbi lakho lokuhlambela, njengokuba zingaphi iitiles zesikwere ozifunayo ukugubungela imigangatho, zingakanani izinto zetheyiphu ezifunekayo kulilize, njl.
Uluhlu oluneenkcukacha lwefanitshala, izinto ezifakiweyo, izinto ezifakwayo, izinto ezigqityiweyo ezizodwa kunye nezinye izinto ziluncedo kakhulu kuvavanyo lweprojekthi. Ukuba ucwangcisa i-DIY yokulungisa indawo yakho yokuhlambela, oku kunokuba sisikhokelo sakho sokuthenga ekulungiseleleni izixhobo.
Ukuba usebenza nekontraka, kusoloko kulungile ukuba nohlahlo-lwabiwo mali oluthile engqondweni kuba oku kubanika umbono wento abanokuyincoma ngokubhekisele kwizixhobo kuba banokujonga ukhetho olunokubakho ukuba ulandela uhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo . Kukwacetyiswa ukuba ufumane uqikelelo lwe-3 kwiikontraka ezahlukileyo ukuze ukwazi ukulinganisa ukuba ufumana elona xabiso lililo.
7. Cwangcisa ukulibaziseka. Ukuhlaziywa kungathatha iintsuku. Soloko ulungele nakuphi na ukulibaziseka. Vumela indlela kuba ukulungiswa kwendawo yokuhlambela yinkqubo entsonkothileyo. Iimeko ezingalindelekanga ezinje ngokufumaneka kwezinto, utshintsho kwishedyuli yomsebenzi wekontrakta yakho, iimeko zemozulu zayo nayiphi na eminye imikhosi yendalo inokuchaphazela ixesha leprojekthi.
8. Lungisa isicwangciso sokuqulela okungehla. Ukulungiswa kwakhona kwegumbi lokuhlambela kunokuba ngumsebenzi ongcolileyo. Nokuba kungangokugaya iithayile, ukukrazula ibhafu endala, isanti, ukususa izinto ezindala, uthuli nengxolo ziya kuhlala zikho ngalo lonke ixesha leprojekthi. Khusela zonke izinto ezinokonakaliswa kwindawo yolwakhiwo. Ukuba unenkxalabo yezempilo, kungcono ukhangele indawo yokuhlala kuyo ngexesha lenkqubo yokulungisa kwakhona. Enye into ekufuneka uyithathele ingqalelo kukuba ibhafu yokuhlambela. Ukuba unegumbi lokuhlambela elinye kuphela endlwini, ungacela ikhontraktha yakho ngale nto kodwa iya kukuxabisa ngaphezulu.
9. Lungisa zonke izinto. Qokelela zonke izinto eziyimfuneko kulwakhiwo kwangaphambili. Qiniseka ukuba yonke into ikwisiza ukunciphisa ulibaziseko kwaye kuthintelwe ukuphindaphinda uhambo oluya evenkileni. Oku akuyi kongela imali kuphela kodwa kunye nexesha kunye nomzamo.
Kukwabhetele ukuphanda ngokufumaneka kwezinto ngaphambi kwexesha ukuze ucwangcise ishedyuli yakho ngokufanelekileyo. Ezinye iithayile, umzekelo, ze-indent order kwaye zingathatha ubuncinci iintsuku ezingama-30-45 ukuziswa. Gcina ukhumbula ukuba ixesha lokukhokela libaluleke kakhulu.
1. Ukudiliza. Ukudiliza kubandakanya ukuthatha izinto ezindala kubandakanya ukudiliza iindonga, ukukhupha izinto ezindala zokuhlambela, ukukrazula ibhafu endala okanye ukususa iithayile.
2. Ufakelo. Ufakelo luqulathe yonke inkqubo yokwakha eqala ngemisebenzi yombane, imisebenzi yokufaka imibhobho yamanzi, iikhabhathi, uthayile weendonga, ukutyibilika, ukufakwa kwezinto kunye nokufikelela.
3. Ukucoca. Emva kokugqiba ukwakhiwa kwegumbi lokuhlambela, ukucoca indawo kuyenzeka. Oku kubandakanya ukurhuqa inkunkuma kunye nokucoca indawo ngokupheleleyo.
4. Ukuhombisa. Isitayile linyathelo lokugqibela lokuhlaziya igumbi lakho lokuhlambela. Kulapho wenza igumbi lilungele ukusetyenziswa ngokubeka izinto zokugqibezela kwisithuba.
Ukuchonga indleko zeprojekthi yokulungisa indawo yokuhlambela kunokuba yinto enzima yiyo loo nto isikhokelo siza kuza siluncedo . Kukho inani lezinto ezahlukeneyo ezinokuchaphazela iindleko zeprojekthi yokulungisa indawo yangasese. Izinto ngokubanzi zibandakanya, ubungakanani bendawo, ulwakhiwo, ubungakanani bomsebenzi, uhlobo lweprojekthi, umsebenzi kunye nezixhobo.
Inkqubo ye- ubukhulu bendawo inokuba yindawo yokuhlambela encinci, kwigumbi lokuhlambela elipheleleyo. Ngokubanzi, iprojekthi yokulungisa indawo yokuhlambela encinci iya kuba neendleko ezincinci kuba zifuna izinto ezincinci. Izinto ezincinci zokuhlambela nazo zibiza kakhulu.
Inkqubo ye- ulala Ikwadlala indima ebalulekileyo ekumiseleni indleko zokulungisa izindlu zangasese. Ukutshintsha ubeko kunokuthetha ukongeza isahlulelo, ukwandisa isithuba okanye ukuhambahamba kulungiso. Imibhobho yamanzi yinto ebaluleke kakhulu ekufuneka iqwalaselwe xa kugqitywa ubume begumbi lakho lokuhlambela. Qiniseka ukuba ukhetha eyona ndlela ibekiweyo enokulungela ukuhambisa imibhobho yamanzi yangasese yakho yangasese ukwenzela ukunciphisa imibhobho kunye neendleko zabasebenzi.
Inkqubo ye- ubume bomsebenzi yeprojekthi yokulungisa indawo yokuhlambela isenokuba yi ukulungiswa okuncinci okanye a ukulungiswa okukhulu. Oku kuyakumisela kwakhona uhlobo lobungcali olifunayo kunye nenani leendleko zabasebenzi kwiprojekthi. Ukulungiswa okuncinci kubandakanya umsebenzi olula njengokupeyinta iindonga, ukubuyisela endaweni okanye ukulungisa iipompo zangasese , uthayipha indawo yegumbi lokuhlambela, ukuphinda ungene kwakhona, ukufaka ishelufu yokugungxula okanye iyunithi yokugcina kunye nokufaka izixhobo.
Ukuba unamava angaphambili okanye ulwazi malunga noku, unokululandela njengeprojekthi Yenza ngokwakho. Oku kukwabiza imali encinci ngokubhekisele kwezabasebenzi kuba isusa isidingo sokuqesha oonokontraka abancinci. Ukulungiswa okukhulu kwelinye icala kunabasebenzi abaninzi kwaye kungcono ukushiya kubaqeqeshi. Oku kubandakanya imibhobho kunye nomsebenzi wombane, ukuthayipha igumbi lokuhlambela elipheleleyo, ukukhupha zonke izinto ezindala zokuhlambela kunye nokufaka ezintsha.
Ngokwendleko, ukulungiswa okukhulu kwehla kwisiphelo esiphezulu, abasebenzi kunye nezinto ezinobulumko. Ukuncipha kubasebenzi abanobuchule, ngakumbi xa kufikwa kumbhobho, kunokukuxabisa ngakumbi ekuhambeni kwexesha ngenxa yobunzima bayo. Iingcali eziqeshiweyo zinokuhlawulisa ngeyure okanye isixa semali.
Iindleko ezipheleleyo zokulungisa kwakhona igumbi lokuhlambela zingahluka ngokuxhomekeke uhlobo lweprojekthi yokulungiswa kwendawo yokuhlambela :
Indawo yokulungisa igumbi lokuhlambela esezantsi. Ixabiso eliphakathi lesiphelo seendawo zokuhlambela ezisezantsi ukusuka $ 3000 ukuya kwi-12000 yeedola . Oku kusebenza kakuhle kubantu abaneebhajethi ezinqongopheleyo. Isiseko sokuhlaziya izixhobo zokuhlaziya kunye nezinye izinto. Kukhethekile ukuhambisa okanye ukwandisa imigca yokufaka imibhobho yamanzi okanye imisebenzi emikhulu yombane. Uninzi lwezinto eziza kufakelwa zikwizinto zerakhi kwiivenkile zokuphucula ikhaya.
Umsebenzi wethayile, umzekelo, unokwenziwa kwiindawo kuphela usebenzisa iithayile eziqhelekileyo zeceramic. Ukunciphisa iindleko, iindonga zinokupeyintwa kwakhona. Iincopho zokubala zokuntywila kwamampunge zigqityiwe ngegranite esezantsi. Ikhabhinethi inokuphinda ipeyintwe okanye ithathe indawo yayo kube lula ukudibanisa iiyunithi. Iindawo zokuhlambela ezisezantsi ezisezantsi zihlala ziyenzela iprojekthi yiyo loo nto iindleko zabasebenzi zingaphantsi. Ikwafuna iimvume ..
Phakathi ukuya kuLuhlu oluPhezulu lweGumbi lokuhlambela igumbi lokuhlambela.Phakathi kuluhlu oluphezulu lweendleko zeprojekthi yokuhlambela$ 10,000 ukuya kwi-30,000 yeedola. Olu hlobo lweprojekthi lunokufumana ukulungiswa okungcono kunye neempawu, i-flooring entsha, umsebenzi wokuthayipha kuyo yonke indawo yokuhlambela kunye nefenitshala eyakhelweyo eyenziwe ngaphakathi enezinto ezizodwa ezigqityiweyo.
Utshintsho kulwakhiwo lunokuhlalwa kunye nokulungiswa kwemibhobho kunye nokulungiswa kombane. Nangona kunjalo, uluhlu lwamaxabiso lusaxhomekeke kwindawo yeprojekthi. Umzekelo wokugqitywa okubandakanyiweyo phakathi ukuya kuluhlu oluphezulu lweendlela zokuhlambela kwinqanaba eliphezulu legranite, imarble, i-quartz okanye ilitye eliyinjineli kwi-countertop.
IKhabinethi inokulungiswa kwaye igqitywe nge-glazing kwaye ihonjiswe ngeenkcukacha ezintsonkothileyo. Isinki ezingelutho zinokwahlulwa zibe zezakhe kwaye zinokubonisa indawo enkulu yokulwa. Izixhobo ezifana neefompu kunye neentloko zeeshawari zinokugqitywa okuphezulu kwaye zinomgangatho ophezulu, ezenza ukuba zihlale ixesha elide kunohlobo olusezantsi. Iithayile zinokuba zenziwe nge-porcelain, into ebiza kakhulu kunee-ceramic. Unokufumana indawo yokubiyela yeglasi entsha.
Ngaphandle kwezi, unokongeza ezinye izinto ezikhethekileyo kwisithuba. Iindleko zabasebenzi phakathi ukuya kwiiprojekthi zoluhlu oluphezulu ziphezulu kuba ifuna inkonzo yeengcali ezinje ngomyili, umtywini, i-tiler, ipeyinti, umbane, umenzi wekhabhathi kunye nezinye iingcali.
Ukuphela okuphezulu okanye ukuLungiswa kweGumbi lokuhlambela.Isiphelo esiphakamileyo seeprojekthi zokuphucula izindlu zangasese zibiza ngeenxa zonke$ 30,000 nangaphezulu. Ezi projekthi ziza neempawu ze-Deluxe kunye neprimiyamu. Yinto epheleleyo ekufuneka ihambile ibandakanya ukuthatha zonke izinto ezikhoyo kwigumbi lakho lokuhlambela kunye nokuphinda ubeke ulungelelwaniso olutsha.
Ukugqitywa kubiza kakhulu kwaye kukwaquka izinto ezizodwa ezinje ngokufudumeza umgangatho, imvula yomphunga okanye ibhafu yewirlpool. Iishawari zodidi ihlala iquka uyilo lwesiko les mosaic, iibhentshi, okanye ezinye izinto ezihlangabezana nabanini bezindlu iinkcukacha ezichanekileyo. Iindawo zokuhlambela ezitofotofo inokwakhiwa ngezinto ezinqabileyo ezinje nge-travertine okanye ibuyiselwe ibhafu yonyawo lwenzipho kuxhomekeke kwisitayile esifunwayo.
Iindleko zabasebenzi ngokuqinisekileyo zikwinqanaba eliphezulu kuneentlobo ezimbini zokuqala kuba iprojekthi inabasebenzi abaninzi abafuna izinto ezibiza kakhulu kunye neenkonzo zoyilo, umyili wezakhiwo okanye injineli kunye neekhontrakthi ezikhethekileyo.
Iindleko zeMpahla nganye
Oku kuchithwa kweendleko nguMbutho weSizwe weKhitshi kunye neBhafu unokusebenza njengesikhokelo ekucwangciseni uhlahlo-lwabiwo mali ngokulungisa kwakhona igumbi lokuhlambela. Ukufakwa kunye neendleko zomsebenzi zithatha uninzi lohlahlo-lwabiwo mali kwi-20%.
Ikhabhinethi kunye nezixhobo ze-hardware ziza ngokulandelayo kwi-16%, zilandelwe zilungiswe nge-15%, iifompo kunye nemibhobho kwi-14%, i-flooring kwi-9% kunye ne-countertops kwi-7%. Ukukhanyisa kunye nokungenisa umoya, iindonga nophahla, zombini zithatha i-5% yohlahlo-lwabiwo mali.
Amasango, iifestile kunye neendleko zoyilo zibiza i-4% inye kwaye i-1% eseleyo kuhlahlo-lwabiwo mali iya kwezinye iindleko. Ewe unokucwangcisa uhlahlo-lwabiwo mali lwakho ngokhetho lwakho, amathuba anokuphela kodwa ukuba nesikhokelo kubalulekile ngakumbi ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukuzibandakanya kolu hlobo okanye kule projekthi. Kukwalumkile ukugcina ingxowa mali yequbuliso ngazo naziphi na iindleko ezingalindelwanga.
Uluhlu olungezantsi lubonisa amaxabiso aphakathi kwento nganye ebandakanyekayo kulungiso igumbi lokuhlambela. Oku kugubungela amaxabiso ukusuka kwiprojekthi esezantsi ukuya kwiiprojekthi zokugqibela, kubandakanya neendleko zokufaka kuhlobo ngalunye:
I-Closet yamanzi okanye indlu yangasese: $ 130 ukuya kwi-780 zamaRandi
Isinki: $ 190 ukuya kwi-6 500 yeedola
Ukuhlamba: $ 450 ukuya kwi-10,000 zeedola
Izixhobo zokukhanyisa: $ 120 ukuya kwii-4000 zamawaka
Umgangatho: $ 800 ukuya kwi-7,000 yeedola
Ama-countertops: $ 900 ukuya kuma-6500
IKhabhinethi: $ 1,200 ukuya kwi-13,000 yeedola
Ibhafu yokuhlambela: $ 400 ukuya kwi-8,000 yeedola
Izithintelo zesithuba kunye neemeko ezikhoyo zesayithi ngamanye amaxesha zinokukuthintela ekwandiseni igumbi lakho lokuhlambela kwigumbi elikhulu ocinga ukuba linjalo. Nangona kunjalo, kusekho izisombululo ezisebenzayo zokuloba onokuzilandela ukuze wenze uninzi lwakho uyilo oluncinci lokuhlambela .
Nasi isikhokelo esilula sokuhlengahlengisa onokuthi usilandele ekwandiseni indawo yakho encinci yokuhlambela:
Khetha umbala wombala okhanyayo kwindawo yakho yokuhlambela. Njengomgaqo oqhelekileyo kuyilo, imibala elula yenza igumbi libonakale likhulu. Iskimu sombala esineetoni ezimhlophe ezimhlophe, umthunzi opholileyo ongwevu okanye umgubo ophuphayo ophuzi, yenza iindawo zibonakale zinkulu xa kuthelekiswa neetoni ezimnyama. Abongezi kuphela umoya omtsha kwindawo kodwa basebenza kakuhle nangayiphi na indlela yoyilo. Unokukhetha kwakhona umbala omnye wepeyinti eludongeni nakwisilingi ukwenza ukuqhubeka.
Sebenzisa uhlobo olufanelekileyo lwezinto zokuhlambela. Isinki sokuntywila okanye isinki yekona ayithathi sithuba sikhulu njengesixhobo sokulinganisa esingenamlinganiso opheleleyo. Kwakhona, ukukhetha ubume obufanelekileyo kunye nobungakanani ukuba ikhabethe lakho linokuphucula ukuhamba komsebenzi kwisithuba.
Sebenzisa ikhethini leshawa endaweni yokufaka ishawa. Amakhethini eeshawari asebenza ngendlela efanayo neyokuvalwa kweshawa kwindawo yabucala. Ikwavumela ukuba uphonononge ngakumbi kukhetho loyilo xa kufikwa kwiipateni kunye neeprinta. Khawukhumbule nje ukunamathela kwiipateni ezinkulu.
Gxininisa imigca ethe nkqo. Ukusetyenziswa okuthe gca kwemigca ethe nkqo kwisithuba kudala ukungaqondi kokuphakama. Iphepha lodonga elinemigca okanye umgangatho ukuya kwiithayile zesilingi ziya kwenza indlu yakho yokuhlambela izive ibanzi.
xa ekuthanda ucaphula
Faka iindonga zodonga kwindawo yakho yangasese. Iindonga zodonga azongezeli kuphela i-aesthetics ebonakalayo kodwa zisebenza ngenjongo enkulu ngokunjalo. Ukuba ibekwe ngaphakathi kwindawo yokuhlamba, inokusetyenziswa njengendawo yokugcina izinto zangasese.
Faka izinto zokugcina ezakhelwe ngaphakathi. Ukugcina ukuxhoma kunye nokuvula okwakhelweyo ngaphakathi kukhulula indawo yomgangatho.
Sebenzisa imiphezulu ebonakalayo. Izibuko zihlala zikhohlisa iliso ngokunika inkohliso yokuphindaphinda indawo.
Gcina indawo ikhanya kakuhle. Vumela ukukhanya kwendalo kudlule kwisithuba ngokusebenzisa ikhethini elibonakalayo kwiifestile. Amagumbi angenafestile, isibane esincinci esikhanyayo siya kukhanya kwangoko kuyo nayiphi na indawo yokuhlambela emnyama. Okwangoku Iipaneli zokuhlambela ngegolide, ubhedu okanye ubhedu ukugqiba kunokwenza umdla obonakalayo wokukhetha ukuhamba izibane ezijingayo ezinesitayile ukufumana izibane ngokuchanekileyo.
Sebenzisa ithayile efanayo kwiindonga nasemgangathweni. Inkqubo yoyilo lwangoku kumagumbi okuhlambela kukusetyenziswa koyilo olufanayo lodonga kunye nomgangatho. Iithayile zegumbi lokuhlambela ngoku zingena kwiifeksi ezigqityiweyo ezinjengeemabhile ezimanyeneyo okanye ilitye elirhabaxa elisebenza ngokukuko kulo mgaqo woyilo. Ukongeza uphawu kunye nobunzulu kwi-monotony yeskimu sakho sombala, yenza umahluko ngokudibanisa izinto ezahlukeneyo zomphezulu kunye nokugqitywa.
Splurge kancinci. Ukongeza okungaphezulu okwahlukileyo njengelitye elingafaniyo nelitye lendalo kwindawo yakho yokuhlambela encinci, kunokudala impembelelo enkulu kwixesha loyilo. Musa ukukhawuleza kwizinto eziphambili. Unokuthathela ingqalelo kuphuculo lwezinto ozigqibileyo kuba uthenga izinto ezincinci.
Uluhlu oluqhelekileyo lweendleko zeprojekthi encinci yokulungisa igumbi lokuhlambela linokuhla ukusuka kwi-1000 ukuya kwi-15000 yeedola amaxabiso asenokwahluka ngokuxhomekeke kwizixhobo ezisetyenzisiweyo kunye nemisebenzi ekuvunyelwene ngayo. Umzekelo, ukusebenzisa indawo ekumgangatho ophezulu kunokubiza indleko ngaphezulu kokusebenzisa umgangatho. Ukugqitywa okukhethekileyo kunye nokulungiswa kweempawu ezizodwa kukwabiza kakhulu. Kodwa kwixabiso eliphakathi lokulungisa kwakhona igumbi lokuhlambela elincinci linokufikelela kwi- $ 9000 ngeprojekthi nganye.
Zimbini izinto ezibangela igalelo lokulungisa kwakhona igumbi lokuhlambela elincinci, indleko ezibonakalayo kunye neendleko zabasebenzi.
Ixabiso lempahla. Izinto ezizodwa zinokuxabisa isixa esikhulu semali. Oku kubandakanya ukugqitywa kwakho okufana nomgangatho kunye neethayile zodonga; izinto ezintsha ezifana nesinki, ikhabethe lamanzi, ibhafu yokuhlambela okanye indawo ebiyelweyo yeshawa; izixhobo zehardware nezokuhlambela ezifana neepompo kunye neentloko zeeshawari; imisebenzi yombane enjengokukhanyisa, iindawo eziluncedo zokungena manzi, izibane kunye nezinto ezizodwa ezinjengezinto zokubala zaphezulu. Ezi zinokubiza malunga ne- $ 8000 ukuya kwi-10,000 yeedola ngokuxhomekeka kuhlobo. Ukwenza igumbi lokuhlambela lifikeleleke kwaye lihambelane nemigangatho yoyilo kwindalo yonke liya kubiza ngaphezulu, ukongeza malunga ne- $ 2000 ukuya kwi-3000 yeedola kwixabiso eliqhelekileyo.
Iindleko zabasebenzi. Njengomgaqo ngokubanzi, indleko zabasebenzi zihlala ziphindaphindwe kabini kunexabiso lezixhobo. Oku kunokwahluka kodwa oku kukunika indlela elula yokuqikelela ukuba ingakanani imali yakho eya kwimirhumo yekhontraktha yakho kunye nabasebenzi, kwigumbi lokuhlambela elincinane leenyawo ezili-100, abasebenzi banokubiza umyinge weedola ezili-12,000 ukuya kwi-13,000 yeedola ukuba iprojekthi iqhubeka uluhlu oluphezulu oluphezulu. Oku sele kubandakanya umda opheleleyo weefom zomsebenzi, zombane ukufakela izixhobo.
Isampulu yokwehla kweendleko kwiimodeli zokuhlambela ezincinci:
Amanani aboniswe ngezantsi luqikelelo nje ngokubanzi olusekwe kwindawo encinci yokuhlambela enezinto ezisisiseko ezinje ngebhafu, isinki kunye nekhabethe yamanzi.
Izinto zokutywina kunye nomsebenzi: $ 3000
Umsebenzi ongasebenzi ngemibhobho yamanzi: $ 9000
Isinki: $ 100
Umgqomo: $ 450
Indlu yangasese okanye ikhabethe lamanzi: $ 175
Iithayile zomgangatho: $ 800
I-Countertop kunye nomdaka: $ 200
IKhabhinethi (ukugcinwa kunye namampunge): $ 550
Izinto zokwakha ezahlukeneyo kunye nezinye izinto: $ 500
Ukuba unolwazi olwaneleyo ngomsebenzi omncinci wokulungiswa kwakhona kokuhlambela indlu yakho yangasese, unokuzama ukufezekisa iprojekthi ngokwakho. Nangona kunjalo, gcinani engqondweni ukwehla okunokwenzeka kokuzibandakanya kwiprojekthi ye-DIY.
iinwele zoomama bomyeni
Ukuphucula indlela igumbi lakho lokuhlambela elibukeka ngayo akusoloko kufuna ukubandakanya umsebenzi onzima, omdaka. Ukuphuculwa okulula kunokuguqula indawo yakho yokuhlambela kwindawo yokuphumla ngaphandle kokonakalisa uhlahlo-lwabiwo mali. Nazi ezinye zezisombululo onokuzisebenzisa xa uzenzela iprojekthi yokulungisa indawo yangasese:
Phinda wenze iithayile zakho kwakhona.Caulk kunye grout zihlala zingakhathalelwanga kwigumbi lokuhlambela. Ukungcola kunye nobumdaka zihlala zixinekile phakathi kwazo zizenza zingabukeki ngakumbi ukuba ziza zimhlophe okanye umbala okhanyayo.
Ukucoca kunye nokufaka kwakhona i-grout phakathi kweethayile kunokubangela umahluko omkhulu ukuba ufuna igumbi lakho lokuhlambela likhangeleke lihlaziyekile. Ukwahlula kwakhona i-tiles ngumsebenzi olula, ofuna isiponji kunye nephalethi yokufaka isicelo.
Ipeyinti. Ukulungiswa kweyona ndlela isebenzayo neyona ilula yokunika indlu yakho yangasese inkangeleko entsha. Ukufaka umbala opholileyo oluhlaza okanye umgubo ongumbala oluhlaza okwesibhakabhaka ezindongeni kunokuguqula imeko yokuhlambela yakho ibe yindawo ekhanyayo, ephumlayo.
Thatha nje ingqalelo ukufuma okukhoyo kwigumbi lokuhlambela. Ngenxa yotshintsho lobushushu, ukungunda kuthambekele ekukhuleni ngokukhawuleza, ke qiniseka ukuba utyala imali kumgangatho ophezulu okanye iimveliso zepeyinti ezikhethekileyo ezinje ngepeyinti emelana nokungunda.
Sebenzisa indawo efanelekileyo xa ukhetha izinto zakho. Ngaphandle kwexabiso lobuhle, indawo yangasese inegalelo kubomi kwindawo yokuhlambela. Ukukhetha ukugqitywa kwezinto ezifanelekileyo kunokukongela imali ekuhambeni kwexesha malunga nolondolozo.
Kuba igumbi lokuhlambela livela kutshintsho lomswakama kunye nokufuma okuphezulu, khetha iithayile ezingafikeleli emanzini kunye neslip ukumelana. Kwiitafile zokubala khumbula ukusebenzisa imiphezulu engatyibilikiyo, etywiniweyo kakuhle nebala elinganyangekiyo. Qiniseka ukuba ukhetha izinto ezinokuthi zisinde ekunqabeni nasekukhaleni kokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Guqula izixhobo zokukhanyisa. Ukukhanya okufanelekileyo kuyabutshintsha ubume begumbi. Ibandakanya umbala olungileyo kunye nokubekwa. Kungaba lula njengokutshintsha ibhalbhu yakho kumbala oshushu okanye opholileyo, okanye uhlaziye isibane esidala.
Ukuba ufuna ukongeza ukukhanya kwezivakalisi, tshintsha nje umbala wezibane zakho zesibini zokukhanyisa zibe mhlophe zifudumele. Ukuba ufuna ukwenza indlu yakho yokuhlambela ibe yinto yanamhlanje, jonga ukukhanya okulula, okucwangcisiweyo.
Ukuphucula iinkcukacha ezincinci. Ungasoloko usenza iindawo zokuhlambela ezikhoyo kunye nezixhobo endaweni yokuthenga ezintsha. Endaweni yokuthenga into engento yokhuni, hlaziya endala ngokusebenzisa ibala lamaplanga.
Izibuko zeglasi okanye iifestile zinokutshintsha ukusuka kwinto ecacileyo ukuya kwiqabaka ngokusebenzisa izincamathelisi. Isakhelo sezibuko ezindala ngokusetyenziswa kokubumba okulungiselelwe esele kwenziwe.
Hlaziya izixhobo zekhompyutha usebenzisa ipeyinti yokutshiza. Guqula i ukubekwa komnini wephepha langasese ukufikelela ngokulula. Ngokukhawuleza yongeza iindonga ezigxininisayo ngasemva kwigunjana lakho lamanzi ngokusebenzisa iphepha lodonga lokuncamathela.
Yongeza umhombiso eludongeni ukwenza indawo ibe yeyonwabisayo. Faka izityalo zangaphakathi ukuze ujonge ngakumbi. Jonga ubuchule bakho. Ukongezwa kancinci kuhamba indlela ende.
Sebenzisa iSoftware yokuRekhisha igumbi lokuhlambela. Kukho uluhlu lwe Isoftware yokulungisa indawo yangasese enokukunceda ubone ngeprojekthi yakho ye-DIY esekwe kumfanekiso okhoyo okanye ngokwakha uyilo lwakho kubungakanani bendawo yakho.
Uninzi lwezi nkqubo luyasebenziseka, alubizi kwaye lunokufundwa ngaphandle kwamava angaphambili. Banokuba luncedo kakhulu ekuveliseni umbono kunye nokumisela indawo yakho yangasese yokuhlambela.
Siyathemba ukuba uzonwabele le mibono yokulungisa izindlu zangasese. Ngakumbi Izimvo zoyilo lwegumbi lokuhlambela ngemifanekiso, jonga igalari yoyilo ngeendlela ezinobuchule zokulungisa kwakhona ikhaya lakho.
iivesi malunga nokuthandana
ithemplethi mema isimemo sokuhlamba esitshatileyo
I tattoo yokuqala kumnwe womsesane
utshintsho igama emva komtshato illinois
uthini u yesu ngomtshato
imizekelo yesifungo somtshato kuye
lithini ixabiso eliphakathi kwendandatho yomtshato